Football Khabar » ३६ भर्सेस ४३ : ड्यानी आल्भेस ‘इतिहासमै सर्वाधिक सफल’ फुटबलर !
३६ भर्सेस ४३ : ड्यानी आल्भेस ‘इतिहासमै सर्वाधिक सफल’ फुटबलर !
गत राति ब्राजिलमा भएको कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनल खेलमा ब्राजिलले पेरूलाई हराउँदै उपाधि जितेपछि ब्राजिलका भेट्रान डिफेन्डर ड्यानी आल्भेसले नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । आल्भेस अब फुटबलको इतिहासमै सर्वाधिक धेरै उपाधि जित्ने खेलाडी बनेका छन् ।
हाल ३६ वर्ष पुगेका आल्भेसले आफ्नो करिअर दौरान विभिन्न क्लब र देशको प्रतिनिधित्व गर्दै कूल ४३ उपाधि जितेका छन्, जुन कुनै पनि खेलाडीले करिअरमा जितेको सर्वाधिक धेरै उपाधि संख्या हो ।
यसअघि सर्वाधिक उपाधि जित्ने खेलाडीको रेकर्ड पनि आल्भेसकै नाममा थियो । अघिल्लो दिन ब्राजिलले कोपा जितेपछि उनले आफ्नै कीर्तिमान भंग गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । आल्भेसले आफ्नो करिअर दौरान ब्राजिलसँगै बाह्या, सेभिल्ला, बार्सिलोना, युभेन्टस र पिएसजीबाट गरी कूल ४३ उपाधि जितेका छन् ।
यस्तो छ आल्भेसीले जितेका उपाधिको सूची :
प्रकाशित मिति २३ असार २०७६, सोमबार १३:३९